गर्मीमा आँखाको ख्याल कसरी गर्ने ? « Bagmati Page
काठमाडौं । गर्मी यामका स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिन्छन् । तापमान बढेसँगै वायुमण्डलमा प्रदूषण पनि बढेको छ । तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी मौसममा आँखामा विभिन्न किसिमका समस्या देखिने गर्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकासहित मुख्य मुख्य सहरहरू अव्यवस्थित हुँदा फोहोर मैला बढ्दा आँखामा प्रत्यक्ष रूपमा सङ्क्रमण बढ्ने आँखा रोग विशेषज्ञ बताउँछन् । आँखामा सङ्क्रमण हुँदा समयमै ख्याल गरिएन भने आँखाको दृष्टि नै गुम्न सक्छ । गर्मी मौसममा आँखा चिलाउने, पाक्ने, पोल्ने, रातो हुने, सुख्खा हुने, बिझाउने आदि समस्या देखिन सक्ने आँखा रोग विशेषज्ञ डा. कमल खड्का बताउँछन् ।
कोरोना महामारी बढेसँगै कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल आदिको प्रयोग गर्ने सङ्ख्या बढेकाले स्क्रिनमा हेर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । आँखा शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्गको रूपमा चिनिन्छ । आँखामा देखिएका समस्यालाई सामान्य समस्या भनेर हेलचक्र्याइँ गर्दा आँखाको ज्योति गुम्ने खतरा हुने आँखा रोग विशेषज्ञ डा. खड्का बताउँछन् । आँखाको उचित हेरचाह अत्यन्त जरुरी भएको उनको भनाइ छ । गर्मी याममा बढी हावा चल्ने, धुँवाधूलो बढी हुने गर्छ ।
गर्मी याममा आँखामा यस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।
आँखा पाक्ने ।
आँखा सुख्खा हुने ।
आँखा पोल्ने ।
आँखा बिझाउने ।
आँखाबाट आँसु आइरहने ।
धुँलोधूवाले गर्दा आँखा धमिलो हुने आदि समस्याहरू देखिन सक्छ । गर्मी याममा आँखाको हेरचाह गर्न विशेषज्ञ डा.खड्का यस्ता सुझाव दिन्छन् ।
हावामा कार्वनमोनोअक्साइड र सल्फरडाइअक्साइड तत्त्व घुमिरहन्छन् । त्यसैले चस्माको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
आँखालाई सधैँ सफा राख्ने, कम्तीमा दिनमा दुई तीन पटकसम्म चिसो पानीले आँखा पखाल्ने ।
आँखा पाकेका व्यक्तिले प्रयोग गरेका रुमालहरू प्रयोग नगर्ने ।
साबुन पानीले राम्ररी हात धोएर मात्रै आँखा छुने ।
आँखामा जथाभाबी औषधि प्रयोग गर्न हुँदैन ।
आँखामा आएको कचेरालाई हातले नछुने, आँखामा हात छोइहाल्न परेमा साबुन पानी हात सफा गरेर मात्रै छुनुपर्छ ।
आँखा सुक्खा भएको खण्डमा विशेषज्ञको सिफारिसमा औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आँखा पोल्ने समस्या भएमा धुलो र घामबाट बच्ने ।
सौन्दर्यका लागि आँखामा प्रयोग गरिने गाजल, आइलाइनर, मस्करा सकेसम्म अरूलाई प्रयोग गर्न नदिने ।
राति सुत्नुअघि गाजल, आइलाइनर, मस्करा राम्रोसँग सफा गर्ने ।
आफ्नो आँखा सफा गर्न प्रयोग गरेको रुमाल अरूलाई प्रयोग गर्न नदिने ।
आँखा पोल्ने समस्या भएमा धुलो र घामबाट जोखिनु पर्छ ।
सकेसम्म आईड्रप्सको प्रयोग कमभन्दा कम प्रयोग गर्ने । आईड्रप्सको हानिकारक रसायनले आँखामा झन् ठुलो समस्या पैदा गर्न सक्छ ।
बालबालिका पानी खेल्न मन पराउँछन् । त्यसैले फोहोर पानीबाट टाढा राख्ने । बाहिरबाट आउँदा सबै जनाले हात धुने बानी बसाल्ने ।
प्रत्येक दिन ताजा खाना खाने, खानामा अनिवार्य रूपमा सागसब्जी, गेडागुडीको समावेश गर्ने ।
बालबालिकाको खानामा प्रोटिन, भिटामिन ‘ए’ समावेश गर्ने ।
धेरै धुवाँ धुलो र घाममा धेरै समय नबस्ने ।
कम्प्युटर ल्यापटपमा काम गर्दा लगातार नहेरी बीचबीचमा विश्राम लिने ।
मोबाइल, कम्प्युटर, टेलिभिजन हेर्दा अलि टाढै बसेर हेर्ने बानी बसाल्ने ।
आँखालाई पनि आरामको जरुरत पर्छ :
लामो समयसम्म स्क्रिनमा हेरेर काम गर्ने, अध्ययनहरूको आँखा सुख्खा हुने पाइएको आँखा रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । यस याममा धेरै हावा चल्ने र कम्प्युटरमा एकोहोरो हेर्दा आँखा सुख्खा हुन सक्छ । त्यसैले लामो समयसम्म मोबाइल, कम्प्युटर चलाउँदा बेलाबेलामाम आँखालाई आराम दिन आवश्यक छ ।
आँखामा कुनै समस्या देखिदा आफ्नो इच्छाअनुसार औषधिको प्रयोग गर्न हुँदैनन् । आँखा रोग विशेषज्ञको सल्लाहमा मात्रै औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय धेरै समयसम्म आँखाको सुख्खा हुने समस्या देखिएको छ ।